Fanarahan-dia - ewa.mg
News - Fanarahan-dia
Nifarimbona nanara-dia dahalo nandroba omby efatra, tany Belambo, Ambatolampy, tamin’ny alin’ny zoma ny fokonolona sy ny zandary. Tratra teny an-dalana ireo malaso saingy nirifatra nanavotr’aina ka navelany teo ny omby rehetra. Tafaverina amin’ny tompony ny biby halatra.
L’article Fanarahan-dia est apparu en premier sur AoRaha.
L’Ecole nationale de la magistrature et des greffes de Madagascar (ENMG), a tenu une conférence de presse, hier, à Tsaralalàna. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue, hier, au siège de cette école, le Directeur Général de l’ENMG, Ramarolahihaingonirainy Anthony a annoncé qu’il y aura deux concours pour l’année 2021. Le premier aura lieu pour le premier semestre et le deuxième pour le second semestre. Selon les estimations, l’école va accueillir 100 élèves magistrats et 50 greffiers. Recueillis par Dominique R. L’article ENMG : Deux concours pour l’année 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article ENMG : Deux concours pour l’année 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Voina tetsy Antaninarenina :: Vazaha nianjera avy eny ambony rihana
Nanokatra fanadihadiana momba ny fahafatesana lehilahy teratany vahiny voalaza fa nianjera avy teny ambony rihana, tao amina toerana fandriam-bahiny iray, teny Antaninarenina ny polisy ao amin’ny Sampana misahana ny heloka bevava (BC). «Mety ho vono olona na voina tampoka no nampian­jera an’ilay lehilahy. Hatao aloha ny famotorana. Misy ny olona ilaina amin’izany. Anontaniana ny vavolombelona sy ny tao amin’ny toerana nisehoan’ny loza », araka ny nambaran’ny mpanao famotorana. Ny valin’ny fanadi­hadiana ihany anefa no hahafan­tarana ny tena zava-niseho marina. Maty tsy tra-drano io lehilahy, roa amby enimpolo taona, teratany vahiny nandalo tao amin’ity toerana fandraisam-bahiny, teny Antaninarenina ity io. L’article Voina tetsy Antaninarenina :: Vazaha nianjera avy eny ambony rihana est apparu en premier sur AoRaha.
ANS : 156 mianadahy nivoaka ho mpampianatra Eps
Tontosa soa aman-tsara, te­ny amin’ny kianja mitafon’ny Aka­demia Nasionaly ny Spao­ro, omaly, ny famoahana ny an­diany voalohany, mitondra ny anarana “Mendrika”, tamin’ ireo mpiofana ho mpampianatra ny taranja EPS (Education Physique et Sportive), eny anivon’ny sekoly manerana an’i Madagasikara. Taorian’ny fiofanana nandritra ny roa taona, miisa 156 mianadahy ireo afa-panadinana ka nahazo ny mari-pankasitrahana sahaza amin’ izay maha mpampianatra izay. Ny tsy fahampian’ny mpampianatra Eps eto Madagasikara ny antony nanosika ny minisite­ran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena sy ny minisiteran’ny Asam-panjakana, hanolotra izao fampiofanana izao ho an’ ireto tanora ireto. Nafonja ny hafatry ny Sekretera Jeneraly ny MJS, Ralaivao Lovatiako, nandritra ny lanonana, omaly. “Tsy taranjam-pampianarana ny fanabeazana ara-batana sy ara-panatanjahantena fa fitsipi-piainana mihitsy”, raha ny nambarany. Andraikitra goavana, hoy izy, ny miandry ireto tanora ireto ary asa lehibe ny fitarihana ireo ankizy sy mpianatra any amin’ny sehatra iasana, ny mba hanana kolontsaina ho tia mampihetsika vatana. “Tsy ho mpiasa anaty birao ny nanomezana fiofanana ho anareo fa hiasa hampihetsika ny eny an-kianja”, hoy hatrany ity SG ny MJS ity, izay nisolo tena an’Andriamatoa Minisitra Ti­no­ka Roberto. Nanamafy kosa ny Tale Jeneraly ny Akademia Na­sionaly ny Spaoro, Andria­ma­toa Jean Claude, fa misokatra ho an’ireto tanora ireto hatrany ny varavaran’ny ANS na dia efa any amin’ny toerana iasany aza izy ireo ary vonona hifanolo-tanana hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ ny Akademia.Nahazo fanomezana ireo telo voalohanyHo fankasitrahana ny ezaka vitan’izy ireo, nahazo fanomezana avy amin’ny BNI Mada­gasikara ireo mpiofana mendrika telo mianadahy, nahitana an’i Sambizafintsoanatody Rho­dès Didelot, Ralaimanga Lorenjo Chistopher Jean Eric ary ny andriambavilanitra Ran­dria­narison Jeanne Esther. Fan­gatahana nataon’ny solontenan’ ireto mpampianatra vao nivoaka ireto moa ny hanafainganana ny fanendrena azy ireo any amin’ ny toerana sy sekoly tokony hia­sany. Toky avy hatrany ny nomen’ny MJS sy ny ANS fa efa an-dalam-pamaliana izay fangatahana izay izy ireo. Ha­nomboka tsy ho ela ihany koa ny andiany faharoa amin’ny fampiofanana.Mi.RazL’article ANS : 156 mianadahy nivoaka ho mpampianatra Eps a été récupéré chez Newsmada.
FISOLOKIANA AMIN’NY TAMBAJOTRAN-TSERASERA :: Lehilahy nahazo telopolo tapitrisa ariary tao amin’ny «Facebook»
Teti-dratsy tsara omana. Vola telopolo tapitrisa ariary no fantatra fa efa azon’ity lehilahy iray tamin’olona niresahanytao anaty tambajotra « Facebook ». Sarona ny fisolokiana nataony. Voasambotra ihany koa izy, ny alakamisy lasa teo. Tamin’ny fampiasana kaonty sandoka no nahafahany nisoloky olona nakany vola an-tapitrisany maro. Tao anatin’ny roa taona izao no voalaza fa nanaovany izany sy nahazoany volabe. Sarin’olon-kafa hitany tao anaty tambajotra «Facebook» ihany no nalain’ity lehilahy nampiasainy tao anaty kaonty iray. Izany no nentiny nampiresahana olona tao. Nilaza ity mpisoloky fa marary sy nidonam-pahoriana. Olona mipetraka any ivelany no lasibatra sy efa nakany vola. Rehefa tonga teto an-tanindrazana ilay avy any ivelany vao nahafantatra fa tsy ny olona noeritreretiny akory no naka vola taminy. Niroso tamin’ny fikarohana an’ilay mpisoloky ny mpitandro filaminana. Nametraka fitoriana rahateo ny lasibatra. Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay voarohirohy rehefa noentina teny amin’ny Fampanoavana, omaly. L’article FISOLOKIANA AMIN’NY TAMBAJOTRAN-TSERASERA :: Lehilahy nahazo telopolo tapitrisa ariary tao amin’ny «Facebook» est apparu en premier sur AoRaha.
Tenisy – «Figueira Da Foz»: nandrombaka amboara i Tessah
Roa taona aty aoriana, nandrombaka ny amboara fanindiminy ho azy indray i Tessah Andrianjafitrimo nandritra ny fifaninanana « Figueira Da Foz » Open tao Portugal omaly…. Tsy mitsahatra ny misongadina hatrany ireo mpilalao fanatanjahantena teratany malagasy monina any ivelany ka isan’izany Andrianjafitrimo Tessah, nandrombaka ny amboara mitentina 25 000 dolara tamin’ny fifaninanana “Figueira Da Foz”, tao Portugal, omaly. Amboara fanindiminy sahady ho azy tao anatin’ny roa taona monja ity nobatainy ity. Toarian’ny nandreseny ilay teratany Espagnola, i Maria Guterriez Carassco, teo amin’ny manasa-dalana, lavon’ity teratany malagasy mizaka zom-pirenena frantsay, mitana ny laharana faha-255 maneran-tany, ity teo amin’ny famaranana ny mpilalao frantsay, i Jessika Ponchet. Ity farany izay faha-259 eo amin’ny laharana maneran-tany. Nanjakan’i Tessah tanteraka ny lalao ary nanehony ny hakingany sy ny mahamatihanina azy tanteraka ny fifaninanana. Vokany, resiny tamin’ny isa 6-7, 6-1, 6-0 io mpifandrina aminy io. Marihina fa 2019 no nandrombaka ny amboara farany ho azy i Tessah raha toa ka amboara fanindiminy ho azy kosa ity nobataina nandritra ny fifaninanana “Figueira Da Foz”, Open 2021 vehivavy ity. Tsiferana R.L’article Tenisy – «Figueira Da Foz»: nandrombaka amboara i Tessah a été récupéré chez Newsmada.